StreamGeek ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုနယူးယောက်မြို့သို့ ဦး တည်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » အဆိုပါ StreamGeek ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနယူးယောက်မြို့မှခေါင်းနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်
ရှင်ပေါလု Richards, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လွှအရာရှိ, StreamGeeks အားဖြင့်
ငါးအချိန်အိုလံပစ်ရွှေကိုဘားဂျွမ်းကစားသမား Nadia Comăneciတခါကလည်း "ခရီးခံစားကြည့်ပါနဲ့နေ့တိုင်းပိုကောင်းရရန်ကြိုးစားလျက်, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုများအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုံးရှုံးကြဘူး။ " ဒီစကားတည်ထောင်သူကတည်းကငါ့အခရီးစဉျတှငျငါနှင့်အတူအ resonated ပါပြီ 2017 အတွက် StreamGeeks ။
ဤသည်နိုဝင်ဘာလ, အ StreamGeeks NYC အတွက်၎င်း၏ကြင်နာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ဦးပထမဦးဆုံး hosting ပါလိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက်လွှင့်ပညာရေး၏ဤအပြည့်အဝနေ့က streaming မီဒီယာများ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင်ထိပ်တန်းစိတ်ထဲတွင်အတူတကွဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ဒါပေမယ့် StreamGeeks နေသောချောင်းမြောင်း? အဆိုပါ heck ဤလူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းအဘယ်သို့ပြု?
ကျွန်မပထမဦးဆုံး 2015 အတွက်တိုက်ရိုက်လွှင့်စတင်လာတဲ့အခါငါတတ်နိုင်သမျှနီးပါးတိုင်းအမှားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်ပြီးနောက်, YouTube ပေါ်မှာပုံမှန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီးထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရောင်းအားနှင့်အွန်လိုင်းထိတွေ့မှုအတွက်အဓိက uptick ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း PTZOptics streaming များကင်မရာများအသက်ရှင်ငါ groove တွေ့ရှိခဲ့နှင့်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံပရိသတ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ငါ Co-နှင့် host နောက်ဆုံးမှာအချိန်ပြည့်ထုတ်လုပ်သူပေါ်ယူဆောင်တိုင်အောင်ရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ Facebook မှာတိုက်ရိုက် 2016 အတွက်ဖြန့်ချိသည့်အချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်စီးဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းပရိသတ်များအတွက်ပိုမိုဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရဖို့ရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းသောကြာနေ့ YouTube နဲ့ Facebook မှာနှစ်ဦးစလုံးမှ streaming ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်စီးစစ်မှန် ရှိ. , ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှစီးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဘဏ်ဍာမဟုတ်သောသူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနှင့်အတူစေ့စပ်။ အချိန်တိုးတက်သေး, ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာအောက်ပါအချက်များကိုနဲ့အသိပညာဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်ငါ "စာအုပ်ရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် တိုက်ရိုက်လွှမတ်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာလည်းသူတို့လည်းပရိသတ်တွေနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်အခြားသူများကိုပြသသောလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသရုပ်ဖော်, ငါတို့ပြုသမျှအလုပ်တစ်ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျအခြားသူများအားဤအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပေးချင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်လွှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ setup ကိုတဆင့်စာဖတ်သူတွေကိုယူ။ ကျနော်တို့က Chester ကောင်တီ, Pa အတွက်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီပေးခဲ့သည်။ , သူတို့ရဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်စီးထုတ်လုပ်ရန်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပူးတွဲကျင်းပအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှု၏သားကောင်များအတွက်ဒေသခံတစ်ဦး non-profit လစာတိုးပိုက်ဆံကူညီရန်တိုက်ရိုက်စီးနှင့်ငါတို့သည်လည်းဒေသခံ, ရပ်ရွာရေဒီယိုဘူတာရုံများအတွက်တိုက်ရိုက်စီးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိတ်သတ်များအတွက်အချိန်လေး teachable ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Pre-ပြပွဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အရာအားလုံးခွဲစိတ်ချင်ပါတယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Podcast တခုကိုစတူဒီယိုထဲမှာပြပွဲ post ကြှနျတျောတို့၏ကင်မရာများတက် setting များ၏နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများရိုက်ချက်များကနေသူတို့နှင့်အတူအရာအားလုံးကို shared ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအပြည့်အဝ-စကေးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်များတိုင်းခြေလှမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဒါကတစ်ဦးအတွက်လူတစ်ဦးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်အိုင်ဒီယာမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ငါစစ်မှန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုစေနှင့်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရဖို့ရန်တက်ရောက်လာဘို့အခွင့်အလမ်းများနှင့်တကွ, ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲကနေသေးငယ်တစ်ခုခုစကေးမျှော်မှန်း။ ဒီကနေ, အ StreamGeeks ထိပ်သီးအစည်းအဝေး မွေးဖွားခဲ့သည်။
မှာနိုဝင်ဘာ 8 တွင် Downtown Dream ချယ်လ်ဆီးအတွက်, ငါ့အသင်းကိုငါတိုက်ရိုက်လွှင့်ပညာရေး၏အပြည့်အဝနေ့က hosting နေကြသည်။ 8 ညနေမှဖြစ်ကြောင်းကို5မှစ. တက်ရောက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်
သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတိုက်ရိုက်စီးကိုထည့်သွင်းဖို့ရှာဖွေနေ streaming ပညာရှင်များနှင့်အပျော်တမ်း။ ငါကအမှန်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းအပေါ်ကြင်နာ၏ပထမကွန်ဖရကြလိမ့်မည်ပြောဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်, ကြှနျုပျတို့ကအမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကိုအောင်မှကျူးလွန်ပါတယ်။
အဆိုပါ StreamGeeks ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြောရမှာပီဂျက်ဖရီ Colon Microsoft ကကြော်ငြာအမှတ်တံဆိပ်စတူဒီယို၏ဦးခေါင်းနှင့်စာရေးဆရာဖြစ်လိမ့်မည် "ပြတ်တောက် Marketing ကို။ " သူအသက်ရှင် streaming များ၏အာဏာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်နည်းဗျူဟာ, podcasts, ထိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သူ၏ဟောပြောချက်ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, အသက်ရှင်သောဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အားကစား။ ခရစ် Packard တို့နောက်ဆုံးပေါ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များပလက်ဖောင်း, LinkedIn တို့တိုက်ရိုက်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံးစီအီးအိုခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်, ခေါင်းဆောင်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစဉ်းစားမိတယ်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပြားအပြင်, ကြာသပတေးနေ့တွင်ထူးခြားတဲ့ VIP ဧည့်ခံရှိရလိမ့်မည်။ Urbanist တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူက New York City, မိုဘိုင်း streaming များကျွမ်းကျင်သူအားလုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များစဉ်အခါ, meatpacking ခရိုင်၏ခရီးစဉ်အားငါပေးမည်!
သငျသညျတိုက်ရိုက်လွှင့်ပညာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်ထွက်ထွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အိပ်မက် Downtown နိုဝင်ဘာ 8 မှာကျွန်တော်တို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်း။ full-နေ့ကလက်မှတ်စျေးနှုန်းများရုံ $ 295 ဖြစ်ကြသည်။ နေ့လည်စာပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါ မကြာမီအဖြစ်အပျက် 250 တက်ရောက်အဖြစ်သို့ခံရသည်ကို ထောက်. ။ virtual လက်မှတ်များလည်းရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပရီမီယံကို virtual လက်မှတ်တွေသင်တို့ရှိသမျှသည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အသံသွင်းဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ငါသိပ်ခြင်း, Big Apple က၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
ပေါလုသည် StreamGeeks မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လွှအရာရှိချုပ်နှင့်ရေးသားသူဖြစ်ပါတယ် "တိုက်ရိုက်လွှမတ်စျေးကွက်ဖြစ်၏။ " Richards တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု, မိုဘိုင်း streaming များနှင့်ပိုပြီးအပေါ် UDEMY အပေါ် 20,000 ကျောင်းသားများကိုကျော်သင်ပေးတယ်။ Richards Las Vegas မှာပြသတရားဝင် NAB (လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး) တည်ခင်းဧည်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတွေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်လက်သိရသည်။
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-10-01
ယခင်: 2-941 MHz Band အတွက်အခုဆိုရင်ရှိနိုင် Lectrosonics Venue960 Receiver စနစ်
နောက်တစ်ခု: ကြေညာလိုက်သည် 2019 HPA ဆုပေးပွဲအဘို့ကို Creative Category: လျာထားစာရင်း